Jaban Rotary Drum NPK Isku-darka Bacriminta Qalabka Mashiinka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Rotary Drum?
Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator waa mid ka mid ah qalabka muhiimka ah ee warshadaha bacriminta xarunta. Habka ugu muhiimsan ee shaqadu waa higgaadinta qolofta qoyan. Iyada oo loo marayo qadar gaar ah oo biyo ah ama uumiga ah, bacriminta aasaasiga ah ayaa si buuxda kiimiko ahaan loogu falceliyay dhululubo kadib markii la qoyay. Marxalad gaar ah oo dareere ah, dhaqdhaqaaqa wareegga ee foostada ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo cadaadiska soo saarista walxaha ee kubbadaha. guud ahaan NPK granulation bacriminta khadka wax soo saarka waxaa ka mid ah:
Qaab dhismeedka Gawaarida Gawaarida Bacriminta ee Rotary Drum
Mashiinka waxaa loo qaybin karaa shan qaybood:
1) Qaybta qaybta: qaybta jidhka oo dhan ee qaybta taageerada ee qaybta, xooggu wuu ka weyn yahay. Sidaa darteed qaybaha mashiinka taayirrada wheeled waxaa loo isticmaalaa saxanka birta kaarboon, welded by channel, iyo iyada oo loo marayo xakameynta tayada adag iyo shuruudaha Gaarka ah gaar ah, ayaa gaadhay ujeedada isticmaalka mishiinka. Waxa intaa u sii dheer ee muhiimka ah ayaa lagu dhejiyay khaanadaha daryeelka, iyada oo loo tixgelinayo duubitaankeeda jirku yeelan doono khilaaf weyn, waxaan ku beeraa si gaar ah loo xushay ka hortagga daxalka, qalabka xirashada u adkaysta, si weyn u wanaajiya nolosha mishiinka, Midka kale sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu rido mid ka mid ah afarta dhinac ee giraangirta oo leh jillaab laalaada, rar si fudud loo dejinayo iyo rarka.
2) Qeybinta gudbinta: dhamaan qeybta wadida gawaarida waa mid kufiican jirka shaqada oo dhan waxay leeyihiin xariiqan. Jir Gudbinta waxaa laga sameeyey bir tayo sare leh, iyo iyada oo loo marayo shuruudaha tayada adag. Ku rakib mashiinka gudbinta On matoorka ugu weyn iyo reducer waxaa lagu xushay alaabada ka dhaafitaanka qaranka ISO, tayada lagu kalsoonaan karo. Gawaarida gawaarida gawaarida, V-suunka, gudbinta hoos u dhigida dunmiiqa, si jirku u shaqeeyo, oo hoos u dhiga qeybta hoose ee shaqada, isticmaalka nayloonku wuxuu qori doonaa wajiga isku xira qaniinyada Wareejinta gawaarida.
3) Qalabka waaweyn: oo lagu hagaajiyo jirka, iyo ilkaha gudbinta ilkaha garka, ka soo horjeedka ayaa kaxeeya shaqada jirka, adeegsiga aalado teknoolojiyad sare u adkaysta, si mashiinku u cimri dheeraado.
4) Roller: waxaa lagu hagaajiyaa labada dhinac ee jirka si uu u taageero jirka oo dhan.
5) Qeybta jirka: dhamaan granulator-ku waa qeybta ugu muhiimsan jirka, kaasoo ka sameysan saxan bir ah oo tayo sare leh oo alxamid ah, kuna dhexjiro linar gaar ah oo caag ah ama qalabka birta ahama ee u adkaysta aashitada, si loo gaaro nabarro otomaatig ah, buro ka baxsan , Ka jooji qalabka wax lagu xoqo ee dhaqameed, iyo iyada oo loo marayo xakamaynta tayada adag iyo shuruudaha nidaamka gaarka ah si loo gaaro ujeedada mashiinka la isticmaalay.
Feature of Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator
1. Qiyaasta granulate-ku waa ilaa 70%, kaliya qaddar aad u yar oo soo noqosho ah, soo noqoshada alaab yar oo walxaha yar yar, ayaa markale la awoodi karaa
2. Ku rid kululaynta uumiga, hagaajinta heerkulka maaddada, maaddada ku jirta kubbada ka dib markii biyuhu hooseeyaan, hagaajinta waxtarka qalajinta;
3. leh caaga injineernimada caaga ah ee dahaadhka, alaabta ceyriinka ah ma sahlana in lagu dhejiyo, waxayna door ka ciyaaraan ka hortagga daxalka;
4. Soosaarid ballaaran, isticmaalka tamarta oo hooseeya, kharashka dayactirka oo hooseeya.
Waxbadan Ka Ogow Waxsoosaarka NPK Xarunta Bacriminta Rotary Drum Granulation Production
Bacriminta isku dhafan waxaa soo saaray qashinka durbaanka. Bacriminta isku-dhafan waxay ku siin kartaa nafaqooyin dalagyada qaab wareegsan. Habka ayaa ah in kiimiko ahaan loo soo saaro nafaqooyinka ugu muhiimsan (sida N, P, K iyo cunsurrada kale ee raadraaca) ee ay u baahan yihiin dalagyada, oo leh nitrogen, fosfooraska, potassium iyo walxo kale oo kiimiko ah oo ku habboon hadhuudhka dalagga dalagga, ka dibna iyadoo la adeegsanayo dalagyada ciidda. Ka nuugo nafaqooyinka carrada. Mabda'a geeddi-socodka waxaa ka mid ah nitrogen, fosfooraska, jajabyada potassium, walxaha sulfate ammonium, kaalshiyamka hydrogen fosfateerka iyo walxaha bacriminta isku dhafan: marka hore, bacriminta fosfooraska (cilmi ahaan loo yaqaan "calcium superphosphate") waa la ammoniated; alaabada ceyriinka ah ee budada ah waa la kariyay, waa la qalajiyey waana la qaboojiyey si loo soo saaro bacriminta isku dhafan ee isku dhafan. Nidaamka tikniyoolajiyada ee khadka wax soo saarka bacriminta isku dhafan waxaa loo qeybin karaa walaxda ceyriinka, isku darka alaabta ceyriinka ah, qashin qubka ceyriinka, qalajinta walxaha, qaboojinta walxaha, buundada walxaha, sheyga dhameystiran iyo xirmada ugu dambeysa ee alaabada
Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator Video Show
Xulashada Model Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator
Dhexroor gudaha ah
Degree Degdeg ah
Hore: Nooca Cusub Granulator Bacriminta Dabiiciga ah
Xiga: Disc Organic & Xarunta Bacriminta Granulator
Nooca Cusub Organic & Xarunta Bacriminta Gra ...
Hordhac Waa maxay Nooca Cusub ee Mashiinka Qalabaynta Bacriminta Noolaha Organic & Compound? Nooca Cusub ee Mashiinka Qalabaynta Bacriminta Nadiifinta & Isugeynta wuxuu adeegsadaa xoogga aerodynamic ee uu ka dhasho xawaaraha sare ee mashiinka kicinta ee mashiinka siilleenka ah si qalabka wanaagsan looga dhigo isku-darka, kala-soocidda, spheroidization, ...